Nostra Signora dei Dolori, festa del giorno per il 15 settembre | Ilblogdellapreghiera
Nwanyị anyị dị mwute, oriri ụbọchị nke Septemba 15
Akụkọ banyere Nne anyi di aso
Ruo oge ụfọdụ, e nwere ememme abụọ iji sọpụrụ Addolorata: otu nke malitere na narị afọ nke XNUMX, nke ọzọ site na narị afọ nke XNUMX. Ruo nwa oge Chọọchị zuru ụwa ọnụ na-eme ememe ha abụọ: otu na Fraịde tupu ụbọchị ụka nkwụ, nke ọzọ na Septemba.
Isi akwukwo nso banyere ihe mgbu Meri bu na Luk 2: 35 na John 19: 26-27. Ihe odide Lucanian bụ amụma Simiọn banyere mma agha nke na-adaba mkpụrụ obi Meri; ihe odide nke John weghachitere okwu nke Jisos si nelu obe rue Meri na onye ozi a huru n’anya.
Ọtụtụ ndị dere akwụkwọ nzụkọ ụka n’oge ochie kọwara mma agha ahụ dịka ihe mgbu Meri, ọkachasị mgbe ọ hụrụ ka Jizọs nwụrụ n’elu obe. Ya mere, a na-achịkọta ụzọ abụọ dị ka amụma na mmezu.
Saint Ambrose na-ahụ Meri dị ka onye na-egbu mgbu ma dị ike na obe. Meri atụghị egwu n’obe ebe ndị ọzọ gbara ọsọ. Meri ji ọmịiko lee ọnya nke Ọkpara ahụ anya, ma ọ hụrụ n’ime ha nzọpụta nke ụwa. Mgbe Jizọs kwụgidere n’elu obe, Meri atụghị egwu ọnwụ, mana o nyefere onwe ya nye ndị na-akpagbu ya.
Ihe ndekọ Jọn banyere ọnwụ Jizọs bụ ihe atụ dị ukwuu. Mgbe Jizọs nyefere Meri onye ọ hụrụ n’anya nye Meri, a na-akpọ anyị òkù ka anyị ghọta ọrụ Meri rụrụ n’ime Nzukọ-nsọ: ọ na-ese onyinyo Nzukọ-nsọ; onye ahụ na-eso ụzọ hụrụ n'anya na-anọchite anya ndị kwere ekwe niile. Ukem nte Mary eka Jesus, enye edi eka kpukpru mme anditiene enye. Ọzọkwa, mgbe Jizọs nwụrụ, o nyefere Mmụọ ya. Meri na Mmuoko na esonye n'ibia umu ohuru nke Chineke, ihe dika ihe dika akwukwo nke Luk neche Jisos. dum akụkọ.
← Na post gara aga Gara aga post:Tugharia uche taa banyere ihunanya zuru oke nke obi nne anyi di aso
Ọzọ Post → Post ozo:Oziọma taa 15 Septemba 2020 na okwu Pope Francis